Fursad intee la eg ayuu Pogba u heystaa inuu soo laabto kulanka Manchester derby – Gool FM
(Manchester) 29 Feb 2020. Xiddiga khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa ku laaban doona tababarka kooxda koowaad isbuuca soo socda isagoo fursad u helaya inuu ciyaaro kulanka Derby-ga ee ay la ciyaarayaan Manchester City, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya France.
26-sano jirkan ayaa kaliya si rasmi ah ugu soo muuqday Man United xilli ciyaareedkan, isagoo saftay kaliya labo kulan oo horyaalka ah tan iyo bishii Sebtember.
Pogba wuxuu la dhibtoonayay dhaawac canqowga ah kaas oo dib looga sii darsaday bishii Decemberr, wuxuuna u baahnaa inuu maro qalliin bishii hore.
Sida laga soo xigtay wargeyska Faransiiska ah ee “L’Equipe, ciyaaryahanka qadka dhexe wuxuu heystaa 50-50 fursad ah inuu kasoo muuqdo kulanka Manchester derby ee dhici doona 8-da Maarso, laakiin kulanka Spurs ayaa laga yaaba in uu dib garoomada ugu soo noqdo.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegeysa in tababaraha France Didier Deschamps uu qarka u saaran yahay inuu ka tago Pogba kullamada saaxibtinimo ee qaranka uu ciyaararo bisha March.
Qaranka heysata hanashada Koobka Adduunka 2018-kii ayaa wajihi doonta Ukraine iyo Finland, laakiin Deschamps ayaan dooneynin inuu qatar geliyo xiddiga qadka dhexe haddii uusan ka soo muuqan kulanka Manchester City.